मोबाइलमा फोन नम्बर डिलिट हुँदा रिस्टोर गर्ने तरिका ! – Nepal Online Khabar
भाद्र ८, २०७८ मंगलबार 194
काठमाडौं : कहिलेकाहिँ कारणवस स्मार्टफोनमा रहेका सयौं सम्पर्क नम्बर गायब हुन पुग्छन् । जसले निकै तनाव दिने गर्दछन् । फोन हराउँदा, चोरी हुँदा वा बिग्रिएर अर्को मोबाइल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा कतिपय प्रयोगकर्ताले यस्तो समस्याको सामना गरिरहेका हुन्छन् ।
यस्तो अवस्थामा हरेक व्यक्तिको नम्बर पुनः खोजेर एक-एक गरेर सेभ गर्नु साँच्चिकै अर्को झन्झटको काम हुन पुग्छ ।यदि तपाईंको मोबाइलबाट पनि महत्वपूर्ण सम्पर्क नम्बरहरु डिलिट भएका छन् भने गुगलको सहयोगमा सहजै ती नम्बर रिस्टोर गर्न सक्नुहुन्छ । यसका लागि तपाईंले आफ्नो कन्ट्याटलाई गुगल ड्राइभमा ब्याकअप गरेको भने हुनुपर्दछ ।
यसका लागि सबैभन्दा अगाडि फोनको सेटिङमा जानुहोस् ।अब गुगलमा ट्याप गर्नुहोस् ।
Prevबुधवारदेखि मनसुन थप स’क्रिय हुने पूर्वानुमान !
Nextप्रहरी हवल्दार घुससहित प’क्राउ !